म किन विवाहित त्यसैले युवा प्राप्त गर्नुभयो? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
हिजो म केही कुराहरू समातेर गर्न स्टोरमा लेट रात स्टप गरे र म कोषाध्यक्ष संग एउटा एकदमै रोचक कुराकानी भएको थियो. त्यो मेरो वस्तुहरू स्क्यान रूपमा हामी साना कुरा गरे, र त्यसपछि उनले मलाई छुट कार्ड प्रस्ताव तर म मेरो पत्नी पहिले नै एक थियो तिनलाई भन्नुभयो. कुराकानीमा मजा पायो त्यही छ. म यसलाई धेरै पटक अघि थियो गर्नुभएको किनभने म यो कुराकानी सबै पनि राम्ररी थाह छ. यो जस्तै केहि जान्छ ...
व्यक्ति: के!? तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ?
मलाई: हाँ म दुई र आधा अचम्मको वर्ष विवाह गरिएको छ.
व्यक्ति: तिम्रो उमेर कति हो? तपाईं एक बच्चा जस्तो.
मलाई: म बीस तीन छु.
व्यक्ति: तपाईं त जवान हुनुहुन्छ! किन संसारमा के तपाईं त्यसो हुनेछ?
मलाई: किन म नहीं?
मा 2009, म एक्काइस वर्षको को बल्लतल्ल कानुनी र बल्लतल्ल जी वर्षको उमेरमा विवाह. मेरो विवाहपूर्वको समयमा, मंगनी, र छोटो विवाह, म प्रश्न जस्तै समय र समय फेरि सोधे गरिएको छ, "किन यति सानो विवाह? यो भीड के?”, र मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने, "तपाईं पर्खेको र आफ्नो जीवन पाएका छन् गर्नुपर्छ!”
यी प्रश्न को मान्छे को केही अपरिचित थिए, तर केही परिवार थिए. म "यस्तो जवान मा विवाह भएको थियो पागल प्राप्त” उमेर?
जब मैले गरे राम्रो मलाई तीन कारण दिन गरौं म निर्णय विवाह गर्न.
1. म एक ईश्वरीय महिला भेट
बाइबल कलेज मा एक अठार वर्षीया freshman रूपमा, म सक्रिय श्रीमतीका लागि देख थिएन, तर परमेश्वरले मलाई एक युवतीले आफ्नो हृदय पछि परिचय फिट देखे. त्यो सुन्दर थियो, तर अधिक महत्वपूर्ण त्यो येशूले प्रेम. उनले परमेश्वरको अनुग्रहको खाँचो पापी थियो थाह थियो, र त्यो नम्र थियो, teachable हृदय. हामी त्यही चर्च भाग हुनुको समाप्त भयो, त्यसैले म उनको सेवा हेर्न पायो, बढ्न, र विश्वासी भई अरूलाई उनको समय दिन. म उनको बारेमा मेरो भित्री सर्कल कुरा गर्न थाले. मेरो साथी, mentors, र pastors सबै सहमत – त्यो एक ईश्वरीय महिला थियो. म उनको हिंडिरहेका र मेरो जीवनको बाँकी उनको मायालु देख्न सक्थे.
2. म तयार थियो
यो समय म विवाहको वास्तविकता र के यसको अर्थ एक जीवनकालमा लागि कसैले आफैलाई प्रतिबद्ध गर्न सोच्न थाले. म परिपक्व र पर्याप्त जिम्मेवार थियो वा छैन आफैलाई सोधें. म धर्मशास्त्र मार्फत खोजी र पति को जिम्मेवारीप्रति लाग्यो, र विवाहित मित्रहरू र mentors कुरा. प्रार्थना र कुराकानी धेरै पछि, मेरो mentors र मेरो चर्च मा pastors तिनीहरूले सोचे म उनको पछि लाग्न तयार थियो मलाई भन्नुभयो. म elated थियो. मलाई लाग्यो भने म आध्यात्मिक तवरमा उनको नेतृत्व गर्न तयार भएको थियो तर म उनको पछि लाग्ने गरेका छैनन् थियो, उनको लागि प्रदान, र एक परिवार को टाउको हुन.
3. विवाह आशिष् हो
सुरुमा म जवान विवाह रही कि naysayers साबित थियो जस्तै कहिलेकाहीं ठीक छ जस्तो लाग्यो. तर म धर्मशास्त्रमा देख्यो जब म जस्तै सामान पाउन गरेनन्, "विवाह मृत्यु बराबर! यसलाई भाग्न!” वा, सम्म तपाईं यसलाई बन्द कुनै पनि अब राख्न सक्छ "विवाह पन्छाउन,” वा, तपाईं जीवनको आनन्द उठाउन पनि पुरानो हुँदा "मात्र विवाह,” वा, "एक समय को लागि क्षेत्र प्ले र त्यसपछि सबै भन्दा राम्रो एक रोज्नुहोस्।”
जस्तै बरु म फेला आदेशहरू, "जवानीको कामुकतालाई बस”, र म हितोपदेश जस्तै पदहरू पढ्न 18:22 भन्छन्, "एक पत्नी पाता जसले राम्रो कुरा पाता र परमप्रभु देखि पक्षमा हासिल।”
त्यसैले जब मान्छे भन्न, "तपाईं नजिकै यति जवान विवाह गर्न?” मेरो नयाँ प्रतिक्रिया छ, "तपाईंले गलत प्रश्न सोधिरहेका छौं।” म प्रश्न को मूल मा विवाह मलाई टाढा केहि चुरा कि धारणा छ लाग्छ, मेरो युवा प्रतिबद्ध बलिदानको प्रेममा बर्बाद भइरहेको छ भने यो आकस्मिक खुशी र flakiness लागि प्रयोग गर्न सकिएन गर्दा.
विवाह परमेश्वरबाट एउटा सुन्दर उपहार हो! यो अनुग्रहको माध्यम हो. म एक पत्नी फेला, र एउटा असल कुरा हो. म भन्ने तर्क सहमत छैन, लामो तपाईं गर्न सक्छन् रूपमा परमेश्वरको अमीर आशिष् पन्छाउन. बरु म भन्न परमेश्वरको राम्रो उपहार आनन्द र उहाँको महिमा लागि तिनीहरूलाई भण्डारे.
यो बेला मैले गरे सबैलाई विवाह गर्नुपर्छ भनेर भन्न छैन. म विवाह गर्न प्रयास गरेका छन् भने म तयार गर्नु अघि यो खराब गएका छन् थियो. हामीलाई केही थप परिपक्व गर्नुपर्छ, र हामी अरूलाई सन्तुष्टि लागि प्रभु र उहाँको समय प्रार्थना र भरोसा गर्न आवश्यक. मेरो लक्ष्य साना तपाईं विवाह भन्न छैन, तपाईं अधिक पवित्र. म केवल मिथ्यालाई हटाउन चाहन्छु कि हामीले वयस्कतामा ढिलाइ गर्नुपर्नेछ र विवाह consider० बर्ष भन्दा बढी उमेर भएपछि मात्र विचार गर्नुहोस्.
म त जवान विवाह रही पछुतो मान्नेछैनौं भने ट्विटर कसैले मा अन्तिम रात मलाई सोधे. मेरो जवाफ? पक्कै छैन.
यो म कहिल्यै गरे भन्दा राम्रो निर्णय एक हो. म सुखी र holier भन्दा म दुई र आधा वर्ष पहिले थियो छु, र एउटा असल कुरा हो. म जस्तै म केही सुपर दुर्लभ विसंगति छु यो जस्तो बनाउन चाहँदैनन्. मलाई थाहा जस्तै जवान वा मलाई भन्दा साना विवाह गर्ने मान्छे प्रशस्त. तिनीहरू पनि एक उपहार विवाहलाई देखे र तिनीहरू उपहार को फल देखेका छौँ. मलाई र मेरी श्रीमती अब जवान हुन सक्छ, तर म अनुग्रह लागि मेरो पत्नी प्रेम हाम्रो जीवन को अन्त सम्म राम्रो प्रार्थना छु. त्यतिन्जेल म हितोपदेश को बुद्धि पालन गर्न र "मेरो युवा को पत्नी आनन्दित चाहन्छु।”
Jannon Fitzpatrick • अगस्ट 19, 2013 मा 6:58 छु • जवाफ
म सम्मानपूर्वक केविन फेरेयरसँग सहमत छैन. तपाईं प्रेम को हो थाहा हुँदैन जबसम्म तपाईं परमेश्वर को हुनुहुन्छ थाहा छैन, किनभने भगवान प्रेम हुनुहुन्छ! बाइबल फेला पार्नको लागि अरूसँग कुराकानी गर्ने वा अरूसँग कुराकानी गर्ने बारेमा केहि पनि गर्दैन. वास्तबमा, इसहाकले रिबेकालाई हेरे अनि थाहा पाई कि उनी उनी हुन्. उनी वरपर डेटि or गर्दैनन वा लेआसँग कुरा गर्थे यदि उनी राम्रा छिन भने उनलाई थाहा हुन्छ कि राहेल वास्तवमै आफूले चाहेको कुरा हो कि होइन।.
मेरो आफ्नै अनुभवबाट बोल्दै, मैले अरूलाई मिति दिएँ र माया के थिएन भनेर पत्ता लगाएँ. न केवल मेरो आफ्नै सम्बन्धबाट, तर मेरा बाबुआमाबाट’ र बहिनीहरू’ सम्बन्ध. समस्या थियो, तिनीहरू वचन वा भगवानको प्रेममा आधारित सम्बन्ध थिएनन् त्यसैले उनीहरूले काम गरेनन्. मैले ईश्वरीय मानिसलाई भेट्टाए, त्यसोभए यसले तपाइँले भन्नु भएको तरिकाले काम गर्न सक्छ, तर म पूर्ण हृदयले विश्वास गर्दछु कि यदि मैले मेरो हृदयलाई ती कुराको लागि सही नभएको सम्बन्धका लागि पर्खेर रक्षा गरेको भए, म एक धेरै राम्रो र कम टुक्रिएको स्थितिमा हुने थियो, मेरो पतिलाई ईमान्दार महिलाको परिप्रेक्ष्यमा प्राप्त गर्नका लागि भन्दा एउटा भाँचिएको महिलाको परिप्रेक्ष्यमा काम गर्ने सामानको साथ.
कुनै अनादर अभिप्रेत छैन, तर म विश्वास गर्दछु यो एक ठूलो गलत कम्बल कथन हो जसले जवान दिमागलाई गलत दिशामा सार्न सक्छ. (ईश्वरीय डेटि vs बनामको बारेमा गुगल जानकारी. आधुनिक डेटि।. त्यहाँ त्यहाँ केही राम्रो चीजहरू छन्।)
डेबोराफ्याटुएड • अगस्ट 19, 2013 मा 6:59 छु • जवाफ
यो awsome छ
KevinFerere • अगस्ट 19, 2013 मा 6:59 छु • जवाफ
तपाईंले पनि मलाई सहि प्रमाणित गर्नुभयो. बाइबलले आफूले चाहेको कुरा भन्न सक्छ, तर तपाईं अनुभवहरू सबै तपाईं बाहिर जानु पर्छ. र जसलाई तपाईं भगवान भन्नु हुन्छ तपाईंको शिक्षा र तपाईंको अनुभवहरूको समाप्तिबाट आउँछ. अन्त मा, के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ छनौट हो, तर तपाइँ के जान्नुहुन्छ वास्तविकता द्वारा थोपरिएको छ.
र हो, कथन अलि सामान्य हुन सक्छ, तर यसलाई नुनको अन्नको साथ लिनु पर्छ, केहि मा जस्तै.
तयार 70० • अगस्ट 19, 2013 मा 7:00 छु • जवाफ
म सम्मानपूर्वक केविन फेरेयरसँग सहमत छैन.
केवल एक कुरा मात्र प्रमाणित भयो कि तपाईंले आफ्नो अन्तस्करणको निर्णय परमेश्वरको वचनको लागि आफ्नो जीवनलाई जीवनको लागि नबनाउने निर्णय गर्नुभयो, बाइबल. जबकि, हामीले ईश्वरीय विवाहमा जीवन बिताउने निर्णय गरेका छौं, भगवानको वचन मार्फत. कुरा को तथ्य हो, यदि कसैको जीवनमा ईश्वरलाई प्रथम स्थानमा राखिएको छैन भने एकलाई यो ब्लगको पूर्ण समझ हुँदैन.
सबै विवाहका लागि प्रार्थना गर्दै! परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ!
KevinFerere • अगस्ट 19, 2013 मा 7:00 छु • जवाफ
मैले मेरो लागि भगवान खोज्ने होशमा निर्णय गरेको छु र कुनै व्यक्तिले मलाई के सिकाएको होईन भनेर. चिन्ता नलिनुहोस्, म तिमी जस्तो भएँ.
AC • अक्टोबर 3, 2013 मा 5:53 बजे •
मँ भन्न चाहान्छु, तपाईं भगवान पाउन सक्नुहुन्न. बाइबलले भने हामी मरिसकेका छौं. मरेका व्यक्तिहरूले केहि गर्न सक्दैनन्. भगवानले हामीलाई भेट्टाउनुहुन्छ.
ओह… मलाई माफ गर्नुहोस् केविन, तपाईं अलमल हुनु पर्छ. मैले सेवा गरेको परमेश्वर स्वयं खोज्नेहरूको परमेश्वर हुनुहुन्न. चिन्ता गर्नु परमेश्वरको इच्छा होइन, तर सबैलाई प्रेम गर्नु उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ! जस्तो मैले पहिले लेखेको थिएँ, भगवानलाई पहिलो राख्नु भनेको यस ब्लगलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि आवश्यक छ, तपाईंको उत्तरले मेरो कुरालाई प्रमाणित गर्दछ. हामी जे पनि भन्छौं र परमेश्वरलाई खुशी पार्छौं. भगवान आशीर्वाद र आफैलाई एक आश्चर्यजनक साँझ छ.
श्रीमती Mukete अर्नोल्ड • अगस्ट 19, 2013 मा 7:00 छु • जवाफ
hahaha, खोजिरहनुहोस्, तपाईं उसलाई पाउनुहुनेछ- याद गर्नुहोस् सृष्टिले पनि उहाँलाई प्रकट गर्दछ. वास्तबमा, म तिमीलाई एउटा चाल दिन्छु, केवल बाइबल छनौट गर्नुहोस् र कथा पुस्तकको रूपमा फ्याक गर्नुहोस् जुन यसले सबै दावीहरू लिन्छ र त्यसमा उनीहरूलाई कण्ठ पार्दछ, अन्य पुस्तकहरू जाँच गर्नुहोस् र दावीहरू तुलना गर्नुहोस्. तर पक्कै पनि तपाइँलाई कसैको व्याख्या गर्न को लागी कसैलाई आवाश्यक हुन्छ, पछि नहट्नुहोस् किनभने तपाईं सत्यको खोजी गर्नुहुन्छ.
यदि तपाइँ ईश्वरमा जति विश्वास गर्नुहुन्छ तपाइँले भनेको जस्तो गर्नुहुन्छ, किन उहाँलाई यति धेरै प्रमाणित गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ? मसँग भगवान छैन, किनभने उहाँ ममा हुनुहुन्छ. म उहाँ हुँ र उहाँ म हुनुहुन्छ. तर मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईं यो बुझ्न सक्नुहुन्न?
डेलीनाबिनी • अगस्ट 19, 2013 मा 7:01 छु • जवाफ
म असहमत छु कि तपाईं कसरी भगवान हुन सक्नुहुन्छ र भगवान कसरी हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं वास्तवमै आफूलाई सृष्टि गर्नुभयो भने तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो?
KevinFerere • अगस्ट 19, 2013 मा 7:01 छु • जवाफ
मेरो नराम्रो, typo: *मैले भगवान प्रमाणित गर्नु पर्दैन। *
तर टिप्पणीको मतलब के हो. तपाई भित्र जो छ, त्यो तिमी हो. त्यो सत्यलाई स्वीकार गर्न डराउनु हुँदैन किनभने तपाईंले यो सिकाउनुभयो कि यो गलत हो.
अदीस शिकारी • अगस्ट 19, 2013 मा 7:01 छु • जवाफ
100 % तिमीसँग! म पनि मेरो श्रीमान्‌लाई भेट्छु 20 र एक बर्ष पछि हामीले विवाह ग .्यौं. अनियमित अपरिचितहरूसँग मैले त्यहि कुराकानी गर्नुपर्‍यो, परिवार र साथीहरु र म तपाईलाई प्रभु र आफ्नो प्यारी पत्नीप्रति वफादार रहन प्रोत्साहन दिन चाहन्छ जुन शब्दमा छुट्याइएको छ. मेरो पति र म अब छौं 30 वर्ष पुरानो हो र जब म मान्छेलाई भन्छु म भएको थिएँ “खुशी छ” लगभग विवाहित 10 वर्ष उनीहरू GASP!!! “साँच्चै”?? समान अस्पष्ट टिप्पणीहरू बनाउँदै “हाम्रो युवावस्था बर्बाद गर्दै” आदि. तर भगवान यस्तो दयालु र दयालु हुनुहुन्छ कि म आफ्नो श्रीमानलाई भेट्दा पाएकोमा म कत्ति धन्यको छु भनेर शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन. हामी सँगै हाम्रो कलेज वर्ष सम्झना गर्न मन पर्छ, र सबै महान चीजहरूको बारेमा सपना देख्दै जुन जीवन हाम्रो अगाडि छ! हामी संग छ2सुन्दर केटीहरू र बाटोमा एक बच्चा केटा (जुन हामीले नम्र भई यस बर्षको लागि प्रार्थना गर्यौं र भगवानले प्रदान गर्नुभयो) , (वास्तवमा म आज बाँकी छु ;-))..र हामी अझ बढी सिक्न सक्दैनौं कि यो हामीलाई एक साथ ल्याउने परमेश्वरबाटको एक मिथ्या संघ थियो.
स्वाभाविक रूपमा, हामी सिद्ध छैनौं (यद्यपि मेरा साथीहरूले यस्तो लाग्छ जस्तो कि हामी अविश्वासको साझा सांसारिक समस्याहरूको सामना गर्दैनौं, अनादर र लगातार बहस), तर हामीसंग असहमति छ, मुड स्विings्ग, वित्तीय भिन्नता आदि, भिन्नता यो छ कि हामी हाम्रा पाइलाहरूको नेतृत्व लिन परमेश्वरमा भर पर्दछौं, हामी एक अर्कालाई सम्मान गर्दछौं र विश्वास कहिल्यै नगुमाउनको लागि सक्दो प्रयास गर्दछौं, संचार, र एक जोडी र व्यक्तिगत रूपमा पवित्र आत्माको मार्गदर्शन खोज्नुहोस्। मेरो श्रीमान् मैले भेटेको सबैभन्दा अनौंठो व्यक्ति हो र हामी दुबैले बुझ्दछौं कि वैवाहिक जीवनमा खुशीको कुञ्जी गरिरहेको वा किन्नबाट आएको छैन। “चीजहरू” सबैलाई खुशी पार्न तर हामी ख्रीष्टमा को हौं भनेर जान्न, विवाह र एक अर्कालाई बिना शर्त प्रेम गर्ने सम्बन्धमा उहाँको आज्ञा पालन गर्दै, हाम्रो कमीकमजोरी वा हामी कसरी हुन सक्दछौं “महसुस” त्यो क्षणमा , थाहा पाउँदा HAPPINESS सधैं अस्थायी भावना हुन्छ जुन टाढा जान्छ, तर साँचो आनन्द केवल प्रभुबाट आउँदछ.
म तपाईं र तपाईंको श्रीमतीलाई धेरै बर्षको खुसीयाली चाहन्छु!!!
मलाई तपाईंको संगीत पनि मार्गमा नै मनपर्छ ;)..
जोश • अगस्ट 19, 2013 मा 7:01 छु • जवाफ
तपाईं युवा मसीहीहरूको लागि ठूलो उदाहरण हुनुहुन्छ जो महिलालाई व्यवहार गर्ने तरिकामा परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छन्! धन्यवाद! म भर्खरै स engaged्लग्न भएँ, छु 22, र आउँदो वर्षको लागि विवाह मा प्रभुको सेवा गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्!
जॉनी_रेन्टेरिया • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस् तर मैले विवाह गरेको उमेरमा भयो 18. म आर्थिक हिसाबले पति बन्नको लागि कुनै पनि हिसाबले तयार थिएन र म पहिलेदेखि नै बुबा थिएँ. तर मैले भर्खरै आफ्नो जीवनलाई ख्रीष्टको हातमा सुम्पिदिएँ र मलाई थाहा थियो कि मसँग थिएँ ती महिलाहरू मसँग हुर्किनेछन्. मानिसहरूले मलाई पनि उही चीज सोध्छन्. मलाई यो दु: खी लाग्छ कि विवाह एक खराब चीजको रूपमा देखिन्छ. आज, म त्यस बारे सोचिरहेको थिएँ र म यस्तो निष्कर्षमा पुगेँ कि मानिसहरू यति धेरै स्वार्थी भएका छन् कि अर्को व्यक्तिको जिम्मेवारी लिने सोचाइ लगभग असम्भव छ. विवाह कहिले र किन तपाइँको बिवाह भयो को बारे मा छैन तर को बारे मा कि विवाह वरिपरि केन्द्रित छ. र यो क्रिष्ट हुनुपर्दछ…
डेबोराह • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
मलाई लाग्छ तपाईं सहि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। मसँग एउटा फ्रन्ड छ जसको विवाह भयो @ 19 (तिनीहरू hv विवाह भएको छ46 yrs NW)एन lkng उनको अब हामीले महसुस गर्यौं कि उनको जीवनमा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु बाहेक डेट उत्तम निर्णय हो जुन उनले अहिलेसम्म गरिनन्….यद्यपि मैले स्वीकार गर्नै पर्छ म तयार छैन2विवाह गर्नुहोस्..हिन मलाई डर लाग्छ किनकि म चाहन्न2हुक हुनुहोस्2d गलत व्यक्ति4मेरो जीवनको बाँकी तर मलाई थाहा छ येशूले मलाई कहिल्यै गलत छनौट गर्न दिनुहुने छैन…साथै म कहिलेकाँहा आश्चर्यचकित हुन्छु विवाह गर्नुहोस् जब म येशूबाट सबै प्राप्त गर्दछु एन उहाँ मेरो एचआरटी कहिलै पनि लिन सक्नुहुन्न?….तपाईको निर्णय सही थियो n i gv u थम्ब्स अप4त्यो!:)
MNM103 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
यसले मलाई धेरै कुरा सिकायो. र यो तपाईंको पत्नीको छेउमा पनि सुन्नुभयो!
लान्स पीटरसन • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
अति उत्तम. मेरो छोराको पनि बिहे भयो21/2 धेरै वर्ष अघि अद्भुत ईश्वरभीरु महिलालाई र उनीहरू दुबै पाका बुढा बुढो थिए 19. तपाईंको कथाले मलाई उनीहरूको सम्झना गरायो.
ब्रान्डन क्लीमेन्ट्स • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
मलाई यो यात्रा मनपर्छ! मेरो विवाह भयो 22 र म बिल्कुल मेरो विवाह लाई माया गर्छु. यो हास्यास्पद छ किनभने मैले भर्खरै एक महीना अघि ग्यास स्टेशन परिचरसँग त्यस्तै कुराकानी गरेको थिएँ. उनले पूरै तानिन्, “किन विवाह हुन्छ जब तपाईं सित्तैमा दूध पाउन सक्नुहुन्छ?” प्रश्न र मेरो मन उनको लागि भाँचियो. तब मैले उनलाई भनेको थिएँ कि मेरी श्रीमती गाई थिइनन्–कि त्यो भयानक थियो र म उनलाई माया गर्छु.
बाडेको मा धन्यवाद!
Sonako • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
loool तपाईं हास्यास्पद हुनुहुन्छ = D
Louib2001 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:02 छु • जवाफ
तपाईं भाइ र आफ्नो युवा आफ्नो प्यारा पत्नी लागि प्रभु प्रशंसा. म प्रभु आफ्नो जीवन भर लगातार पक्षमा खन्याउन हुनेछ प्रार्थना, तपाईं आफ्नो शब्द पालन गरे किनभने. म हुँ 28 र लगभग दुई वर्ष र मेरी श्रीमती को लागि अब विवाह गरिएको छ र म आनन्दित विवाह र एक सुंदर छ 10 किरा पुरानो बच्चा. म सधैं साना विवाह गर्न चाहन्थे, तर मलाई विश्वास छ प्रभु लगभग मेरो राम्रो कुरा ल्याए सम्म यो मेरो लागि अझै समय छैन थियो5धेरै अगाडी (सटीक हुन हामी मा हामी फेरि जन्म भयो दिन भेट 31 दिसम्बर 2006). म चर्च देखि एक साधारण बहिनी रूपमा उनको गरे रूपमा हामी सँगै हुन किस्मत जहाँ थाह भयो. म पनि मेरो आध्यात्मिक वृद्धि मा concentrating थियो, तर तीन वर्ष पहिले मेरो आँखा खोल्न र तिनीहरूले भन्न बाँकी इतिहास छ.
मान्छे विवाह गर्न को लागि हुन यो सैतानको एजेन्डा छ, त्यसैले तिनीहरू पाप बाँच्ने र हामी पहिले नै के हुनेछ थाहा. आज हामी शरीर मा छोडपत्र को दर देख्यो छ? भाइहरू र दिदी चर्च मा fornicating कस्तो, किनभने के समाज हुक्म को.
हामी कसरी हेर्न भने हाम्रो शहर आज युवा हिंसा भरिएका छन्, हामी मूल कारण केही सोच्न एक क्षण लिन गर्छन्? गोलाकार चिकित्सा पद्धति लागि क्षण मानिस विनिमय ईश्वरीय मान यो अलग गिर. पनि मसीही आमाबाबुले ignorantly विवाहित जवान प्राप्त गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई निरुत्साहित द्वारा परिपत्र चिकित्सा पद्धति प्रचार गर्दै (स्पष्ट चासो वर्षको उमेरमा). कारण म उद्धृत गर्दै”तपाईं एउटा शिक्षा प्राप्त गर्न आवश्यक, शायद तपाईं आफ्नो मालिकको समाप्त र एक सभ्य काम छ, त्यसपछि विवाह सोच्न सुरु”. त्यो ध्वनि बुद्धिमानी होइन ? त्यसैले आफ्नो मसीही बच्चा विश्वविद्यालय जान्छ गर्दा के हुन्छ र त्यसपछि केटा / केटी साथी जसको या त मसीही वा गैर संग उत्प्रेरित गर्छ?
कृपया मलाई गलत प्राप्त छैन(त्यो केवल म मार्फत आएका छन् कुराहरू केही छ), माथिको कथन सबै लागू छैन किनभने. एक तिनीहरूले काम र आफ्नो भविष्य परिवार आदि लागि प्रदान गर्न सक्छ, त्यसैले उनको सम्बन्धित पेशामा लागि ज्ञान मा प्राप्त रूपमा शिक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर विवाहको अभ्यस्त एक पालन गर्न छनौट कहिल्यै के क्षेत्र जीवनमा मा सफल देखि एक रोक्न, सामान्य मा एक विवाह ठूलो सेवाको i.e वृद्धि बढावा वास्तवमा एक कुरा रूपमा, राम्रो Heath, धन र सूची मा जान्छ. दुई एउटै शरीर हुन्छ र Chase सक्नुहुन्छ सम्झना 10 000 वाह, कि सम्झौता तिनीहरूले परमेश्वर कहिल्यै के सोध्न विश्वासीपूर्वक तिनीहरूले हासिल हुनेछ भन्ने हो, अति उत्तम…..
नजिकबाट म हामी ख्रीष्टियनहरू परमेश्वरको लागि पहिलो जीवित र दोश्रो विवाहको महत्त्व महत्त्व मा एक युवा उमेर मा हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाउन सुरु रूपमा भन्ने चाहनुहुन्छ( उपहार दिइएको गर्नुभएको गर्नेहरूलाई) त्यसैले तिनीहरू यस क्षेत्रमा परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन चाहने हुर्केर कि. फेरि मेरो भाइ राम्रो काम र परमेश्वरको वचन जीवित सबैलाई. अनमोल रहनुहोस्.
अन्ना • अगस्ट 19, 2013 मा 7:03 छु • जवाफ
यो वास्तवमै मसँग कुरा गर्यो. म छु 21 सम्बन्धमा र म तपाईंलाई भन्न सक्दिन कि मलाई कति चोटि भनियो कि म हुँ “बस्नको लागि सोच्न धेरै जवान”, मैले कुर्नु पर्छ “जीवन पहिले बाँच्नुहोस्”, स्कूल समाप्त र म क्यासिपी / विवाहमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले क्यारियर स्थापना गर्नुहोस्. तपाईंसँग एउटा अचम्मको र प्रेरणादायक गवाही छ. म तपाईं र तपाईंको पत्नी सँगै एक आशिष् र खुशी को एक जीवनभर इच्छा!
अज्ञात • अगस्ट 19, 2013 मा 7:03 छु • जवाफ
म हुँ 20 र सम्बन्धमा कहिल्यै रहेन त्यसैले म विवाह गर्ने छैन 21 तर म निश्चित रूपमा तपाईको तर्कलाई सम्मान गर्दछु. मसँग सधै मानसिकता हुन्छ “प्रत्येकलाई उसको आफ्नै”. मलाई लाग्छ कि तपाईं र तपाईंको पत्नी निश्चित रूपमा दूरीमा जानुहुन्छ र म यी चीजहरूको गर्व गर्दछु कि तपाईंले विवाह अघि गर्नु भएको कदमहरूप्रति. यस्तो देखिन्छ कि तपाईं दुबै प्रतिबद्धतालाई धेरै गम्भीरतासाथ लिनुभयो, जसको म प्रशंसा गर्छु.
टोनी डोइली • अगस्ट 19, 2013 मा 7:03 छु • जवाफ
कम उमेरमा विवाहको बारेमा तपाइँको ब्लग पढ्न धेरै धन्यको. मेरो श्रीमतीको बिहे भयो 18 र हामी खुशी संग विवाह भएको छ 10 बर्ष अब. निश्चित हामीसँग केहि उतार चढावहरू छन्, तर म विश्वास गर्दछु कि ईश्वरले यी सबै वर्षहरूमा स्थिरतापूर्वक हामीलाई डो .्याउनुभएको छ र अब हामी पहिलेभन्दा शक्तिशाली छौं. तपाईको अद्भुत गवाहीको लागि धन्यबाद.
KLE फोटोग्राफी • अगस्ट 19, 2013 मा 7:03 छु • जवाफ
तपाईंको युवा विवाह मा बधाई छ! हाम्रो श्रीमान्‌ र मैले बिहे गरेको बेलामा पनि त्यस्तै भयो 8 वर्ष पहिले मा 20 वर्ष पूरानो! त्यसोभए हामीलाई थाहा छ कि तपाई के माध्यमबाट जाँदै हुनुहुन्छ! मानिसहरूले सोचे कि हामी विवाहित छौं किनकि म गर्भवती थिएँ (म थिएन) वा किनभने ऊ एक अवैध विदेशी थियो (ऊ एक अमेरिकी नागरिक हो). हामीसँग हाम्रो कुनामा धेरै साथीहरू थिएनन् किनकि तिनीहरूले एक्लो काम गरिरहेका थिए. तर अब मा 28 तिनीहरू वरिपरि आएका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् “समात्नुहोस्” म खुसी छु भगवान मेरो पति संग मेरो उमेर को परवाह किए बिना आशीर्वाद दिए. भगवान दुबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस्!
BTW हामी DMV क्षेत्रमा बस्छौं! (MD) हुनसक्छ हामी सबै भेला हुन सक्छौं वा सँगै चर्च जान सक्छौं! हामीसँग अझै विवाहित साथीहरू हइन.
KevinFerere • अगस्ट 19, 2013 मा 7:03 छु • जवाफ
मलाई लाग्दैन कि तपाईबाट केहि चोरी भएको छ, यो तपाईं छोड्दै हुनुहुन्छ. बाइबलमा संरचना पाउन यो राम्रो छ, तर यो तपाइँको जीवन निर्वाह गर्न मा निर्भर गर्दछ, किताब होइन; यो प्रदान गर्दछ कि मार्गदर्शन को बावजुद.
यो प्रतिबद्ध र जवान भइरहेको प्रशंसनीय छ, तर त्यो भाग “युवा वासना” शिक्षा हो र बढ्दै छ तपाईं भेट र सामाजिक महिला संलग्न विभिन्न महिलाहरु बाट प्राप्त. तपाइँ के मन पराउनुहुन्छ र के गर्न मनपर्दैन भनेर सिक्दै, हेर्नुहोस्, र महसुस; तपाईको कार्यक्षेत्र यति सीमित हुनुको सट्टा केवल एक व्यक्तिको लागि.
तपाई वास्तवमै भन्न सक्नुहुन्न कि तपाई को हुनुहुन्छ र तपाई को हुनुहुन्छ भनेर, वा तपाईले चाहानु भएको कुरा पनि, यदि तपाईंले कुराकानी गर्नुभएको छैन तर अन्य महिलाहरूसँग यति धेरै तिनीहरूलाई तपाईंलाई देखाउनको लागि. तपाइँ जान्नुहुन्न कि प्रेम के हो यदि तपाइँलाई थाहा छैन कि त्यो के हो भनेर होइन.
अतिथि • अगस्ट 19, 2013 मा 7:03 छु • जवाफ
प्रेम भनेको के हो भनेर थाहा पाउनुपर्दैन यदि तपाईंलाई प्रेम भनेको के हो भनेर जान्नुहुन्छ. कसरी थाहा पाउने यदि कसैले तपाईंलाई नक्कली दिन्छ भने $100 बिल नभएसम्म जब सम्म तपाईं वास्तविक के हो थाहा छैन $100 बिल जस्तो देखिन्छ. त्यहाँ एक मात्र वास्तविक छ $100 बिल, केवल त्यो अध्ययन गर्नुहोस् र कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कि जब तपाईंलाई नक्कली दिन्छ. प्रेम संग नै. त्यहाँ धेरै नक्कलहरू छन्, तर यदि तपाइँ वास्तविक के हो थाहा छ, त्यसोभए तपाईं नक्कली भेट्न सक्नुहुनेछ. किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, कुनै पनि अभक्त प्रेम प्रेम हुन सक्दैन.
KevinFerere • अगस्ट 19, 2013 मा 7:04 छु • जवाफ
त्यसकारण तपाईं वरपरको मिति र भेट्नु पर्छ र अन्य व्यक्तिहरूसँग यौन सम्बन्ध राख्नुपर्दछ. मेरो कुरा ठ्याक्कै. के अभक्त हो व्यक्तिपरक हो. तपाईं यसको बारेमा कानूनी हुन प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यसो गर्नु हाम्रो स्वभावमा छ, तथापि, हामीले यी आदर्शहरूलाई छोड्नु पर्छ किनभने त्यहाँ प्रस am्गको बीचमा एकदमै खरानी क्षेत्र छ.
एन्जेलडोल १ • अगस्ट 19, 2013 मा 7:04 छु • जवाफ
म तपाईंको बयान अन्य व्यक्ति संग यौन संबंध मा सहमत छैन- STD को, एड्स र अनावश्यक गर्भधारण, त्यस्ता सम्बन्धहरूको नतिजा हो. यदि एक यस्तो सम्बन्ध पछि लाग्छ, तिनीहरूले उचित प्रतिबद्धता र अभिलाषा भन्दा प्रेमको गहिरा र आध्यात्मिक पक्षहरूको बारेमा सिक्दैनन्. साथै म तपाईं कमिट गर्न चाहनु अघि डेटि aboutको बारेमा तपाईंको विचारहरूसँग असहमत छु “आसपास डेटि।” एक nonspouse बाट पति / पत्नी जान्न को लागी एक शर्त छैन. ईश्वरीय कोर्टिंग / डेटि humans मानवको लागि बनाइएको थियो जसरी बाइबलमा चित्रण गरिएको छ जबकि विभिन्न पार्टनरहरू छन्, जथाभावी यौन सम्बन्ध राख्नु भनेको जनावरहरुको स्वभाव हो.
AJ • अक्टोबर 3, 2013 मा 3:46 बजे •
एन्जेलडोल १ यो तपाइँको सोच्नको लागि एकदम भोली छ कि सबै गैर-वैवाहिक यौन सम्बन्धको लागि आवश्यक रूपमा नेतृत्व गर्दछ “STD को, एड्स र अनावश्यक गर्भधारण”… तर पक्कै, तपाईंले थाहा पाउनुहुने छैन यदि यदि तपाईंले आफ्नो धुँडीको पुरानो पुस्तकबाट टाउको निकाल्ने समय लिनुभएको छैन र केही जीवन अनुभव प्राप्त गर्नुभयो भने।.
तपाईं यसलाई नकरात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ. यदि तपाईं परिपक्व र पर्याप्त बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने तपाईं यसको बारेमा सही तरिकामा जानुहुन्छ. अधिक तपाईं केहि बेवास्ता, तपाईं यसलाई नजिक आउनुहुन्छ. सकारात्मकमा केन्द्रित हुनुहोस् र त्यो तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ. तर पक्कै पनि तपाईंको धर्मले यो सिकाउँदैन.
जोश • अगस्ट 19, 2013 मा 7:04 छु • जवाफ
“ठूलो प्रेम यो भन्दा कुनै एक छ, कि कोही आफ्नो साथीको लागि आफ्नो जीवन दिन्छ।” (यूहन्ना 15:13) तपाईंलाई थाहा छ प्रेम के हो यदि तपाईं ख्रीष्टलाई चिन्नुहुन्छ.
कृपया सर, यदि तपाईं धर्मशास्त्र पुनःक्रमित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, कम से कम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको आफ्नो सोच लागू गर्नु हो. यो एक सन्दर्भ हो, एक भाषण गाईड होईन.
उनी • अक्टोबर 3, 2013 मा 12:25 बजे • जवाफ
तपाईंको धर्मशास्त्रमा लिनु गलत छ र तपाईंलाई यो लाग्छ कि तपाईंले आफूलाई एक ईसाईको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ जसले बाइबललाई पछ्याउँदैन तर “सन्दर्भ” यो तर तपाइँको आफ्नै कोड द्वारा बाँच्न छनौट गर्दछ र छनौट गर्दछ र के छनौट गर्दछ, यदि केहि पछ्याउन को लागी परमेश्वरको को बारे मा छ….
तपाईंले दावी गरिरहनु भएको प्रायः झूटो शिक्षा हो.
गाबे ताभियानो • अगस्ट 19, 2013 मा 7:04 छु • जवाफ
तपाईलाई यहाँ ब्लगि see हेर्नका लागि खुसी लाग्यो! यस हप्ता मेरो लागि प्रार्थनाको लागि धन्यबाद, भगवान पक्कै राम्रो भएको छ.
तपाईंको उमेर यति धेरै जवान हुँदै गएको पागल कुरा यो हो कि तपाईंको कान र आँखा तपाईंको केही बर्षमा भगवानको लागि खोलिएको छ केही भन्दा धेरै उहाँलाई बन्द गर्नुभयो।. तपाईंलाई थाहा छ कि परमेश्वर तपाईंको विवाहको एक अंश हुनुहुन्छ तपाईंहरू जस्तो दुवैले जति नै गर्नुहुन्छ, र त्यो ठूलो छ. बाडेको मा धन्यवाद!
मेडेलिन फरेल • अगस्ट 19, 2013 मा 7:04 छु • जवाफ
यो एक उत्कृष्ट विचार प्रक्रिया हो. मेरो विवाह भयो 17 र मेरो श्रीमान् थियो 19. त्यसबेला हामी इसाई थिएनौं, र पनि, हामीसँग थिएन’ बिहे गर्नु. अझै केहि कारणका लागि हामीले गरेका थियौं. हामी लगभग विवाह भएको छ 28 1/2 बर्ष अब, को आमा बुबा हो5र हजुरबा हजुरआमा 2. म मेरो जीवनलाई माया गर्छु. भन्नुपर्दा हाम्रो वैवाहिक जीवनमा कहिलेकाहिँ हामी मध्ये एक जना हिंड्न चाहान्थ्यौं र कहिल्यै फर्केर आउँदैनथ्यो, रिस र क्रोध भनेको एक दिनको लागि हाम्रो दैनिक जीवनको हिस्सा थिएन भन्न खोजेको होइन, वा त्यो सोच्ने तरिकाले हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको सोचाइ प्रक्रिया थिएन. तर हामी प्रतिबद्ध छौं. र जब सम्बन्ध विच्छेद एक विकल्प छैन, परमेश्वर समयमै निको पार्नुहुन्छ.
मेरी छोरीको बिहे भयो 20 र त्यहाँबाट कसैले प्रोत्साहन पाएको थिएन. उनीले बुझ्दिनन् किन कि मानिसहरूले यो समयको लागि आशीर्वादको सट्टा अन्तिम उपाय हो भनेर महसुस गरे. ईसाई समुदाय बीच पनि.
अर्कोतर्फ हाम्रो छोरा क्रिसमसको समयमा विवाह भयो, वर्षको उमेरमा 27. भर्खर सही केटी भेटिएन. एउटा कुरा।. सहि केटा / केटीले गाह्रो समयमा पनि सही छोरा / केटीलाई गइरहेका छन्. केवल क्रसमा टाँसिएर.
सीएल • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
म अधिक सहमत गर्न सक्दिन. धेरै मानिसहरू यस्तो लाग्छ कि विवाह भयful्कर छ र त्यहाँ कुनै खास कारण छैन “हतार” यसमा, तर यो त्यस्तो चीज हो जुन भगवानले हामीलाई आशीर्वाद र पवित्र पार्न प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ. पोष्टका लागि धन्यबाद!
>> तर जब मैले धर्मशास्त्रमा हेरेँ मैले त्यस्तो सामान भेटिन, "विवाह मृत्यु बराबर! यसलाई भाग्न!"वा, सम्म तपाईं यसलाई बन्द कुनै पनि अब राख्न सक्छ "विवाह पन्छाउन,"वा, तपाईं जीवनको आनन्द उठाउन पनि पुरानो हुँदा "मात्र विवाह,"वा, "केहि समय को लागी मैदान खेल्नुहोस् र सब भन्दा राम्रो छनौट गर्नुहोस्।"
अना • डिसेम्बर 9, 2014 मा 1:48 छु • जवाफ
मेरो ब्लगको भ्रमणको लागि धेरै धेरै धन्यबाद – मलाई लाग्छ कि मैले तपाईंको लागि फिड एड्डरहरू पत्ता लगाएँ (मैले यसलाई मेरो टिप्पणीमा राखें). तपाईंको प्रिय परिवार छ, खैर! तपाईको वार्षिकीमा बधाई छ!
Praisemovement • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
तपाइँको पारदर्शिता को लागी र को लागी धन्यवाद “येशू राम्रो देखिन्छ”. पागल को लागी आदर तपाईं लाईविन र ल्याउनु भयो को लागी’ वचनको महिमा.
Andrea Paige जैक्सन • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
त्यो अचम्मको गवाही हो. र तपाईंले यसलाई मेरो र मेरो श्रीमानको दशौं वार्षिकोत्सवमा पोस्ट गर्नुभयो! (हामीले ओल्ड विवाह ग .्यौं, यद्यपि।) : )
Jcsmsoul • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
भगवानले भाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्! मलाई तपाईको मतलब के हो भनेर राम्ररी थाहा छ यद्यपि मैले प्रभुलाई पछि जीवनमा भेट्टाए र म चाहान्छु कि म ईश्वरभ्रष्ट मानिससँग विवाह भएको थिएँ कि उहाँ आफ्नी श्रीमतीप्रति वफादार हुनुहुन्छ।! यी दिनजस्तो यो फेला पार्न गाह्रो छ! र अर्को कारण म आशा गर्दछु र म विवाह गर्छु र एउटा भेट्छु किनकि तपाईले विवाह गरेको बखत प्रेम गर्दा तपाई दोषी महसुस गर्नुहुन्न! भगवान ले रक्षा गरुन!
Jazmin • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
धन्यबाद, सबैले विवाहलाई आशिष्को रूपमा देख्दैनन्. केवल हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र विश्वास गर्नेहरू. मेरो विवाह एकदमै कलिलो उमेर र मा भयो 28 वर्षौं मेरो र मेरो श्रीमान्‌ छन्3सुन्दर बच्चाहरू र हाम्रो जीवन स्वर्गमा हाम्रो बुबाको पूजा र उपासना गर्न समर्पित छन्. विवाह यद्यपि सजिलो छैन, यसमा यो उतार चढावहरू छन् तर भगवानको अनुग्रह र कृपाबाट र उहाँको इच्छामा समर्पण गर्ने व्यक्ति बढ्नको लागि सक्षम छ. तपाईको अद्भुत कथाको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। यो एक साँचो आशिष् हो. मेरो प्रभुले तपाई र तपाईको श्रीमतीलाई वृद्धि हुन दिनुहुन्छ म तपाईको पक्षमा सबै भन्दा धेरै आशिष्को लागि सोध्छु.
टाची संगीत • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
मैले त्यस्तै बिहे गरें “जवान” साथै, र यो एक आशिष् हो, हामी जहिले पनि सँगै हुन्छौं (पाठ्यक्रम हाम्रो छोरी सहित), हामी सबै साझा गर्छौं, र एक अर्कालाई मद्दत गर्नुहोस्, केही ppl सोच्दछन् कि यदि तपाईं यति धेरै विवाह गर्नुभयो भने यो छोटो समयको लागि हुनेछ, तर हामी परमेश्वरलाई प्रायः धन्यवाद दिन्छौं 8 वर्ष विवाहित र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा गर्न को लागी’ भगवान हर समय…आशिष्हरू
Agopylove09 • अगस्ट 19, 2013 मा 7:05 छु • जवाफ
त्यो कत्ति राम्रो छ!! im 25 र ive सबै एक राम्रो पत्नी हुनुको साथ के आउँछ भन्ने कुरा सोच्दै थियो र वास्तव मा आज्ञाकारी हुनु र आफ्नो केन्द्रको रूपमा भगवान हुनु र सधैं सबै को लागी आफ्नो सल्लाह खोज्नु र केवल क्रिष्टको नेतृत्व लिन र क्रिष्टको ठोस भूमिमा त्यो सम्बन्ध निर्माण गर्न। येशू .. हाम्रो उद्धारकर्ताको प्रेममा पहिलो पल्ट साँच्चै आवश्यक छ!! उसको साथको आत्मीय सम्बन्धले तपाईंलाई बढ्न र प्रेम साँच्चिकै हो भनेर जान्न प्रेरित गर्दछ र भगवानले त्यो प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ जुन तपाईंले आफ्नो पति / पत्नीलाई दिनुहोस्।. एक उद्धारकर्ता को लागी धेरै महान जो सधैं प्रदान गर्दछ ..<3
जो स्टीभन्स • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
म वृद्ध हुँ जो Triplee सँग पूर्ण सहमत छ. जे होस् पक्कै पनि यो भिन्न स्ट्रोक हो (उमेर) विभिन्न मान्छेहरूको लागि. र सबैले आफ्नो ईश्वर-डिजाइन समयमा विवाह गर्नुपर्दछ. म हुँ 50 तिम्रो उमेर, म हुँदा मेरो प्रियतमको बिहे भयो 23 र त्यो थियो 20! अब 27 बर्ष र 1 महिना पछि, त्यहाँ निरन्तर छ (राम्रो) हामी बीचको आतिशबाजी, अझै मायामा पागल, सबै भन्दा राम्रा साथी र भगवानको उद्देश्य संगै हिड्दै. मैले विवाह गरेको उमेरलाई व्यापार गर्ने छैन6महिना पछि! तर मेरा बच्चाहरूलाई पनि उनीहरूको परिस्थितिहरू समान हुदैन भनेर जान्नुपर्दछ, न त उनीहरूको लागि समय र योजनाहरू एकै हुन्.
पैसा किन्नुहोस् • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
म वृद्ध हुँ जो Triplee सँग पूर्ण सहमत छ. जे होस् पक्कै पनि यो भिन्न स्ट्रोक हो (उमेर) विभिन्न मान्छेहरूको लागि. र सबैले आफ्नो भगवान-द्वारा डिजाइन गरिएको समयमा विवाह गरेका थिए. म हुँ 50 तिम्रो उमेर, म हुँदा मेरो प्रियतमको बिहे भयो 23 र त्यो थियो 20! अब 27 बर्ष र 1 महिना पछि, त्यहाँ निरन्तर छ (राम्रो) हामी बीचको आतिशबाजी, अझै मायामा पागल, सबै भन्दा राम्रा साथी र भगवानको उद्देश्य संगै हिड्दै. मैले विवाह गरेको उमेरलाई व्यापार गर्ने छैन6महिना पछि!
Reverandjeff • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
मलाई यो सबै राम्ररी थाहा छ… भर्खर हाम्रो विवाहको १th औं वर्ष मनाईयो, र म हुँ 35.. म उस्तै मान्छेहरू मलाई प्रश्न गर्दछन्, तर हामी दुबैलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले यो बनाउनुभएको थियो र यसको डिजाइन गर्नुभएको थियो. हामीले एक अर्काको जीवनलाई PIVOTAL क्षणमा प्रतिच्छेदन गर्‍यौं जहाँ हामी एक अर्काको लंगर हुन समाप्त भयौं, ख्रीष्टको साझा लंगरको साथ. सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको जब हामी युवाहरूसँग कुरा गर्ने मौका पाउँछौं जुन सम्बन्ध / विवाहसँग संघर्ष गरिरहेका छन् र हामी हाम्रो अपवादको गवाही बताउँदछौं। !!! वास्तवमा भन्ने हो भने, केहि वर्ष पहिले JPaul संग यी छलफल भएको थियो।. सानो संसार !!! ईश्वरले ती सबैलाई प्रदान गर्दछ जो सही मूल्य प्रणाली खोज्छन्, र हामी चिकनबोन पछि रननिनको सट्टा हाम्रो पसलको महत्त्व दिन्छौं. :)
जेफ युवा • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
ओह र जिज्ञासुको लागि, हामीलाई बाहिर जाँच गर्नुहोस् http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
मेरो बुवा & आमा हाई स्कूलका प्रियहरू थिए र उनीहरूले स्नातक पछि विवाह गरे (दुबै थिए 18 वर्ष पूरानो). उनीहरू अहिले सम्म खुसीसाथ विवाह गरीरहेका छन् र सँगै आफ्नो जीवन को लागी कुनै पछुतो छैन. वयस्क बन्ने विवाह संगै सुरु हुन सक्छ – र तपाईंको निर्णयको बारेमा तपाईंको दृष्टिकोणले मेरा आमा बुबालाई दर्पण गर्दछ. ईश्वरीय विवाहहरू यस शताब्दीको बीचमा थोरै मात्र थिए….भगवानले तपाईंलाई आशिष् दिनुहुनेछ र कम्तिमा पनि तपाईंलाई खुशी राख्नुहुनेछ 50 वा 60 वर्ष!
मोनिक-जुलिकिया • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
श्रीमतीको कथा कहाँ छ??
जेफ्रेइकटन। • अगस्ट 19, 2013 मा 7:06 छु • जवाफ
म तपाई र तपाईको श्रीमतीलाई धेरै धेरै कथाहरु साझा को लागी धन्यवाद दिन्छु. म छु 21 र मलाई लाग्छ कि म प्रायः उही परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छु. म भर्खर विवाह भएको छैन. तपाईं र तपाईंको पार्टनर प्रेममा हुनुहुन्छ भने किन प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने मेरो मानसिकता छ, दुबै आत्मिक छन्, सकारात्मक, र एक अर्काको आँखा मार्फत सही. मेरो केटी र मलाई कुनै शंका छैन कि हामी एक दिन विवाह गर्ने छौं. तर पनि हामी दुबै विवाह गर्न चाहन्छौं, उनी धेरै समय लिन्छिन्; हामीसँग समय संसारको व्यक्तिमा छ. मँ अधिक ASAP को हुँ म भोली प्रकारको व्यक्तिलाई वचन दिईएको छैन. त्यसोभए किन पर्खनुहोस्? उनी धेरै चलाख केटी हुन्. उनले मलाई तपाइँको श्रीमती र उनको कथा थोरै सम्झाउँछिन्. कुरा स्कूल र क्यारियर लक्ष्यहरूको बाटोमा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने सोचमा. तर त्यो विवाह पछि बच्चाहरूको कुरा गर्नेतिर हो. म सँधै उसलाई भन्छु कि म मेरो पहिलो बच्चाको नजिक हुन चाहन्न 30 वर्ष पूरानो. म उमेरको कारण मेरो शरीरलाई कमजोर बनाउन चाहन्न, जसले मेरा बच्चाहरूसँग खेल्न गाह्रो र थकाउने बनाउँदछ. म चाहन्छु7सबैभन्दा बढी र3कमसेकम. त्यसोभए सभ्य उमेरमा सुरु गर्नु राम्रो हो. तर म यसलाई भगवानको हातमा छोड्न कोशिस गर्दैछु र अधिक चिन्ता लिने छैन.
aneetarh • अगस्ट 19, 2013 मा 7:07 छु • जवाफ
धेरै धेरै यात्रा एन जेस धन्यवाद, n सबैजना हू dt एक तरीका बाट वाdओडा मा एक प्रोत्साहन साझा गरीएको छ. अब म अब विवाह गर्नुभन्दा डराउँदिन विशेष गरी यस तथ्यलाई ध्यान दिई हामी दुवैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं. भगवान bls तपाईं…
ड्यास • अगस्ट 19, 2013 मा 7:07 छु • जवाफ
Jannon Fitzpatrick, मँ भन्छु कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ. साँचो प्रेमको अनुभव गर्ने एक मात्र तरिका प्रेम सिर्जना गर्नेलाई अनुभव गर्नु हो. व्यक्ति बीच हामी हामी त्यो क्यालिबेरमा केहि पनि सिर्जना गर्न सक्दैनौं जबसम्म हामी परमेश्वरलाई हाम्रो प्रेम जीवनको मार्गनिर्देशन गर्न दिदैनौं. “ठूलो प्रेम यो भन्दा कुनै एक छ, कि उसले आफ्नो जीवन साथीहरूको लागि दिए” Jhn 15:13. प्रेमले आत्मसन्तुष्टि पाउँदैन (KevinFerere), वा कसैलाई खोज्ने जो तपाईको मस्तिष्कमा विद्युतीय आवेगहरूलाई सन्तुष्ट पार्न र उत्तेजित गर्न सक्छ. Ironically, तपाइँको तस्वीर “आदमको सिर्जना” तपाईंको पृष्ठमा पुनर्जागरण अवधिबाट आउँदछ जुन प्रेम र डेटि ofको विचारधारा व्यक्तिगत तृप्तिको लागि केहीमा परिणत भयो जब कि कसैको लागतमा फरक पर्दैन।. आदमले परमेश्वर समक्ष पुग्नै लागेको थियो र आफ्नो सृष्टिमा भाग लिनुभयो भनेर यो चित्रण विवेकी हो. विडंबना यो हो, माइकल एन्जेलोले आफ्नो जीवनको अन्तमा उनले के गरेको देखे र पश्चाताप गरे, इसाईमत र मानववादको मिश्रण गर्ने प्रयास गर्दै (मानिस सबै चीजहरूको नाप हो). प्रेमको यो विचारधारा जहाँ छ मलाई लाग्छ तपाईं आउनु भएको हो ? जुन उनीहरूले ग्रीकमा अभ्यास गर्थे, पुनर्जागरण, र आजको संस्कृति. त्यहाँ साँच्चै छ “सूर्यमुनि नयाँ केहि छैन”-सुलेमान, बाइबलबाट पनि.
पल जोन्स • अगस्ट 19, 2013 मा 7:07 छु • जवाफ
हे ट्रिप मेरो विवाह भएको थियो 22 र 28 अब. भर्खर हाम्रो6औं anv थियो. भगवानले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ4युवाहरू. म प्रार्थना गर्छु कि उसले तपाई र तपाईको परिवारलाई आशिष दिऊन्.
डान्स_17 अनलक भयो • अगस्ट 19, 2013 मा 7:07 छु • जवाफ
यो राम्रो यात्रा हो, भगवानले तपाई र तपाइँको श्रीमतीलाई प्रशस्त आशिष् दिऊन्… र अरूले यो ^ _ ^ द्वारा आशिष् दिए <3
CLL • अक्टोबर 3, 2013 मा 12:15 बजे • जवाफ
परमेश्‍वरको भलाईको निम्ति र उहाँ पूर्णरूपमा समर्पण गरिएको जीवनमा उहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको कत्ति राम्रो गवाही छ. मेरो श्रीमान्‌ र म तुलनात्मक रूपमा कलिलो विवाहित थियौं (मा 24) र तपाईं र तपाईंको श्रीमतीलाई मन पराउनुहुन्छ, परमेश्वर हामीलाई उहाँको महिमाको निम्ति एकसाथ ल्याउन योग्य हुनुहुन्थ्यो. हाम्रो छोराले जवान विवाह गरे, उमेर मा 20 यस वर्षको सुरूमा…हाँसो :-) र उसले पक्कै पनि आफ्नो ईश्वरीय पत्नीमा राम्रो कुरा भेट्टाए. हामी उसको लागि अरू केही चाहँदैनौं र यो आशिष्‌ हो.
करेन्डा • अक्टोबर 3, 2013 मा 12:18 बजे • जवाफ
कस्तो राम्रो लेख! मेरो श्रीमान्‌ र मैले पनि जवान विवाह ग .्यौं, म थियो 22 र मेरो श्रीमान् थियो 25. हामीले भर्खर मनायौं 15 विवाहको बर्ष. येशूले, वर्षौंको दौडान दम्पतीको रूपमा हामीलाई सँगै ल्याएको छ, हामीलाई सिकाउँदै “हामी आफैंले मर्” राम्रो प्रेम र एक अर्काको सेवा गर्न को लागी. धेरैजसो विवाहहरूको स्वार्थी संख्या एक विनाशक हो.
यो धर्मशास्त्र सम्बन्धित छ विवाह को विषय को लागी अगाडि र इमानदार हुन तपाईंको इच्छुकता को लागि धन्यवाद!
माइकल • अक्टोबर 3, 2013 मा 1:16 बजे • जवाफ
मेरी श्रीमती र मैले विवाह गरेका थियौं 21 साथै, र त्यो थियो 11 बर्ष र6बच्चाहरु पहिले (जैव / अपनाईएको / फोस्टर). मलाई थाहा थिएन म हुँ “धेरै जवान” बिहे गर्नु, मलाई थाहा थियो उनी एक हुन् जो म बिना बाँच्न चाहन्न! भगवान राम्रो भएको छ.
AJ • अक्टोबर 3, 2013 मा 2:16 बजे • जवाफ
रेखा बीचको पढाई: हामीले येशूलाई प्रेम गर्‍यौं र हामी सि horn्गा थियौं.
म यो सबै समय ईसाईहरू बीच भएको देख्छु र सोच्दछु कि यस्तै तर्कहरू जुन वास्तविक उत्प्रेरणाको वरिपरि नाच प्रफुल्लित छन्. यो केवल सेक्स गर्न पापी हो, त्यसैले यो जीवनभर प्रतिबद्धता मा हतार गर्न धेरै समझदार छ.
क्लारा • अक्टोबर 3, 2013 मा 2:21 बजे • जवाफ
भगवानले त्यो विवाह सुरू गर्नुभयो भनेर पक्कै देख्नुहुनेछ. तपाईं युवा क्रिश्चियन युवाहरू र युगल यात्राको लागि प्रोत्साहन हुनुहुन्छ. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष!!
JOB • अक्टोबर 3, 2013 मा 2:52 बजे • जवाफ
म को उमेर मा विवाह 21 र उही वर्षमा तपाईले ट्रिप लीको रूपमा लिनुभयो, भित्र 2009. म थियो जब म उनको चर्च मा भेटे 16 वर्षौं पुरानो हो र हामी लगभग सँगै छौं 8 बर्ष अब. हामीले AYCM मन्त्रालयहरूको साथ मिलेर परमेश्वरको सेवा गरेका छौं, गाउँहरूमा पुग्दै र फिलिपिन्समा परमेश्वरको वचन साझा गर्दै. हामीले एक अर्कालाई हरेक दिन भन्यौं “म तिमीलाई माया गर्छु किनकि तपाईले परमेश्वरलाई कति माया गर्नुहुन्छ भनेर म देख्छु”. म उनलाई विवाहमा उनको हात मागेकोमा कहिले पछुताउँदिन. विगत4विवाहको वर्षहरु एक आशिष भएको छ.
त्यो मानिस • अक्टोबर 3, 2013 मा 2:55 बजे • जवाफ
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< यो मान्छे हो?? lol
इसहाक • अक्टोबर 3, 2013 मा 4:06 बजे • जवाफ
भगवानको वचन वास्तवमै सर्वोच्च छ. हितोपदेश 18:22 स्पष्ट रूपमा यो बाहिर हिज्जे.
”जसले आफ्नी पत्नीलाई भेट्टाउँछ उसले उत्तम कुरो भेट्टायो, र प्रभुको अनुग्रह पाउँछ.
विवाह गर्न चाहने जोसुकैको लागि मेरो लिनु भनेको पहिले र सबैभन्दा राम्रो साथीको छनौटमा परमेश्वरको निर्देशनको लागि सोध्नु हो. हामी मानिस भएकोले हामीले आफ्नै छनौटहरू गर्नुपर्दैन र भगवानलाई यसमा आशिष्‌ दिन आग्रह गर्दछौं. बरु, हामीले पूर्ण आज्ञाकारितामा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, भगवानको अनुग्रहको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनको लागि उहाँको निर्देशन पछ्याउन निर्देशनको लागि सोध्नुहोस्.
SteveMcMillon • अक्टोबर 3, 2013 मा 4:40 बजे • जवाफ
म यसलाई धेरै सम्मान गर्छु!! यो यति उत्साहजनक छ किनभने मसँग विवाह गर्ने इच्छा भएको छ6तिम्रो उमेर र धेरै व्यक्तिले मलाई यसको लागि तल राख्नुभयो. धेरै हिसाबले यसले ममा असुरक्षा ल्यायो. यसका लागि पुन: धन्यबाद!
तेरी • अक्टोबर 3, 2013 मा 4:59 बजे • जवाफ
अलिकति सकियो 35 वर्षौं अगाडि मैले मेरो हाई स्कूलको प्रियेसँग विवाह गरें. हामी दुबै थियौं 18, लगभग 19. हामीसँग धेरै न्यासेयरहरू थिए र मेरो बुवाले मलाई आशा पनि राख्नुभयो कि म सम्बन्ध विच्छेद गरेर डाक्टर भेट्छु. जब भगवानले विवाहको व्यवस्था गर्नुहुन्छ यसले दुलहा र दुलहीको उमेरलाई फरक पार्दैन. धेरै आशिष्!
हराएको • अक्टोबर 3, 2013 मा 6:01 बजे • जवाफ
म विवाह पनि जवान थिए (20 सटीक हुन). अब मा 32, मलाई लाग्छ कि तपाईको विवाह कुनै पनि उमेर मा र जो कोहीलाई कुनै पनि समयमा विवाह गर्न सकिन्छ… र कुनै पनि परिस्थितिमा उहाँलाई प्रेम गर्ने एक व्यक्तिलाई आफैंलाई नजीक ल्याउन परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुनेछ… तपाई जस्तोसुकै हुनु आवश्यक छ उहाँ पवित्र जस्तो पवित्र हुन. यसैले म त्यहाँ विश्वास गर्दिन जस्तो छ “एक”… कुनै पनि व्यक्ति जो विवाह गर्न छनौट गर्दछन्, बन्नु “एक हो” एक अर्का को लागि :)
हराएको • अक्टोबर 3, 2013 मा 6:02 बजे • जवाफ
तर पक्कै पनि यो साँचो हो यदि दुबै विश्वासीहरू छन्
जनी • अक्टोबर 3, 2013 मा 10:27 बजे • जवाफ
तिमीलाई धेरै धन्यवाद. मेरो श्रीमती र मसँग त्यस्तै कथा छ. एक मित्रले आज यसलाई पोष्ट गर्यो र यो मलाई चाहिएको थियो. हाम्रा प्रभु येशूको प्रशंसा गर!
Lise • अक्टोबर 3, 2013 मा 10:39 बजे • जवाफ
यो लेख को लागि धन्यवाद! म हुँ 36 वर्ष पुरानो र मैले १ y बर्षको लागि विवाह गरेको छु…हो, म थियो 17 जब म मेरो १y बर्षको वृद्ध पतिसँग विवाह गर्छु! हाम्रो छ बच्चाहरु छन्, प्रभुलाई प्रेम गर र अति खुशी छौं :) हामीसँग सबै प्रश्नहरू सबै समयमा सोधिन्छ र यो एक लोकप्रिय विकल्प वा धेरैका लागि सही विकल्प नहुन सक्छ, म हरेक दिन एकदमै खुसी र विश्वासयोग्य छु कि हामीले हाम्रो लागि सही छनौट गरे.
स्टेफन • अक्टोबर 3, 2013 मा 11:18 बजे • जवाफ
यो अचम्मको छ. म धेरै मानिसहरूलाई चिन्छु जो यो सोच्दछन् कि यो तपाईंको जीवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो. म हुँ 22 र मैले वास्तवमा कसैसँग मेरो विचारमा रहेको छु जुन मैले हाई स्कूलको सोफोमोर वर्षदेखि चिनेको छ र माया गरेको छु. म निश्चित छु कि चीजहरू तपाईको लागि घाममा र वर्षाका छैनन्, न त म यो मेरो लागि आशा गर्दछ. म सबै नकारात्मकता एक तरफ राख्नु भएको र ठूलो चित्र हेरेर तपाईलाई लाग्यो कि भगवानले तपाईलाई डोर्‍याउनु भयो. यदि कोही तपाईका लागि सदैव खुशी छैन भने, म साँच्चै हुँ.
किम हन्टर • अक्टोबर 4, 2013 मा 8:30 छु • जवाफ
मैले मेरो श्रीमान्लाई भेटें 14 जब म थिएँ हामीले विवाह ग .्यौं 21 र उहाँ थियो 23 हामी सँगै भएका छौं 22 वर्ष र विवाह 15 ती मध्ये 22 जवान व्यक्तिसँग विवाह गर्नुमा केह कुनै गलत छैन जुन व्यक्तिले जीवनमा कसरी हेर्दछ….किनभने तपाईको लाईफर तपाईलाई बनाउनु हुन्छ….र हो म र मेरो श्रीमान मुक्ति पाउँछौं र ईश्वरमा विश्वास गर्छौं र हामी ईश्वरको साथ उसको जीवन बाँचिरहेका छौं सबै कुरा सम्भव छ विशेष गरी लामो स्वास्थ्यकर मायालु विवाह केही सजिलो छैन तर ईश्वरको साथ तपाईं यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ।…….धन्य हुनु!!
उल्लेख: म किन यति धेरै जवान विवाह गरे? - किंगडम केकरहरू किंगडम केकरहरू
Cherisse • अक्टोबर 4, 2013 मा 9:43 छु • जवाफ
प्रभुलाई चिन्न र उहाँको वचन बुझ्न पाउनु कस्तो आशिष्‌ हो. म इच्छा गर्छु कि तपाई जस्तो अरु मानिसहरु थिए. दियाबलले तपाईंलाई निराश बनाउन नदिनुहोस्. हामीलाई थाहा छ उहाँ जताततै हुनुहुन्छ.
GrantYoung • अक्टोबर 4, 2013 मा 12:44 बजे • जवाफ
हामी र मेरी श्रीमतीको बिहे भयो 22 र म उही अनुभव थियो. सुरक्षित भएका र बचत नगरिएका साथीहरू मलाई थाहा दिन चाहन्छन् कि म बाँच्न बढी बाँच्दछु. मेरो हजामले मलाई गर्न सक्ने सबै क्लबिंग र भोजको सम्झना गरायो. मेरो “नजिक” साथीहरूले अन्वेषण गर्न समुद्रमा अरू माछाहरू पनि थिए भनेर वर्णन गरे. खैर, हामीले वास्तवमै उही समयमा विवाह गर्‍यौं3अन्य जोडीहरू हाम्रो उमेरले गरे! हामी अल्पसंख्यक छौं तर निश्चित रूपमा एक्लो छैनौं र यो सम्झन उत्साहजनक छ.
भगवानको अनुग्रहले हामीले भर्खर मनायौं3बर्ष र यो अद्भुत छ! ट्रिप साझा गर्न को लागी धन्यवाद!
मार्क • अक्टोबर 4, 2013 मा 4:24 बजे • जवाफ
मेरो लिन्छ कि यदि तपाईं यति जवान विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसो गर्दाका नतिजाहरू. यो एकदम कठिन अवस्थामा पनि धेरै गाह्रो छ. यदि तपाईं अहिलेसम्म काम गर्नुभएको कठिन परिश्रम गर्न तयार हुनुहुन्न र पूरै त्याग र निराशा र हृदय दुखाईको सामना गर्नुभयो।, यसको लागि साइन अप नगर्नुहोस्. तर, यदि तपाईं सहन सक्नुहुन्छ (र केहि मान्छे गर्छन्) यदि समय मा इनामदायी हुन सक्छ.
केविन • अक्टोबर 4, 2013 मा 5:42 बजे • जवाफ
मलाई यो बाइबली आधारित दृष्टिकोण मनपर्दछ. अमेरिकी ईसाईहरु बीच यो दुर्लभ छ, जहाँ सांस्कृतिक र सामाजिक संरचना यति विवाह विरोधी हो, एक जवान व्यक्ति हेर्न, एक जेठो मान्छे पनि, परमेश्वरको संस्थाको मूल्यमा त्यस्तो आध्यात्मिक तवरमा परिपक्व दृष्टिकोण राख्नुहोस्. मैले पढेका धेरै टिप्पणीहरूमा आधारित छ, यो परिप्रेक्ष्य मान्छे लाई यति धेरै विदेशी लाग्छ, चर्चमा समेत किनकि हामीले आफैलाई दिनको सामाजिक नियमहरूतर्फ झुकाउन अनुमति दियौं भन्दा भगवानले मूल्यवान्‌ ठान्ने कुराको बाइबलीय सत्यलाई भन्दा. तपाइँको यात्राको लागि प्रार्थना गर्दै, विश्वासीको जीवनमा व्यावहारिक र वास्तविक बनाइएको सुसमाचारको सत्यता र परमेश्वरको वचनको साझेदारी राख्नुहोस्.
पास्टररोब • अक्टोबर 5, 2013 मा 6:55 छु • जवाफ
म तपाईंलाई यात्राको बारेमा जान्न चाहन्छु- ली मैले विवाह गरे2महिना पछि म फर्कें 21. के परमेश्वर यसमा सबै हुनुहुन्छ?? के यो सबै मानिसहरुका विचारका बाबजुद र किन मैले विवाह नगर्नु पर्छ भनेर उनीहरूको तर्कको बावजुद मैले पर्खनु पर्ने थियो. भगवानको मानिस मेरो लागि विवाह भएको छ 16 बर्ष अब संग2राम्री केटीहरू र म ईश्वरीय ज्ञानीहरूको लागि पूर्ण रूपमा महान छु, आदरणीय बहुमूल्य रत्न. तपाईको गवाहीको बारेमा सुन्दरता भनेको यो तपाईलाई भन्नुको लागि हो!!!
उल्लेख: एकल v. विवाहित… | जीवनको अर्थ
माभिस • जनवरी 28, 2014 मा 10:10 छु • जवाफ
मसँग सबै युवाहरूका लागि सल्लाह छ. यदी तिमी 18 वा अधिक, जीवनसाथी खोज्न सुरु गर्नुहोस्! बाहिरका सेक्स यदि विवाहले तपाईलाई दुखाइ बाहेक केही ल्याउँदैन, आत्मा र खराब स्वास्थ्य को दुबै, मानसिक र शारीरिक. विवाह भएको आनन्द र आर्थिक बूस्टर छ! यदि तपाईं एक्लै हुनुहुन्न भने तपाईले धेरै काम गर्न सक्नुहुनेछ र लुफको मजा लिन सक्नुहुन्छ. तपाईंको आमा बुबा सायद सम्बन्धविच्छेद भएको कारण उनीहरूले युवावस्थामा उनीहरूको हृदयलाई अनुसरण गरेका थिएनन्! मसँग यो सबै वर्णन गर्ने ठाउँ छैन, तर तपाई जोडी हुन तयार हुनुहुन्छ. Yor सूची को लागी सुरु गर्नुहोस् लक्षणहरु तुरून्त हुनु पर्छ र युवा विवाह जब तपाइँ तपाइँको पूरा हृदय छ दिन. म हुँ 53 र धेरै मायालु खुशी संग विवाहित हुन. म मा विवाह भएको थियो 31 -धेरै चोटि चोटले भरिएको छ र धेरै ढिलो यदि युवा मार्ग धेरै ढिला भयो भने. आशा छ यदि तपाईं आफ्नो युवावस्थामा बुद्धिमान्‌ हुनुहुन्छ र यसमा उपस्थित भएर यसको आनन्द लिनुहुनेछ!
GOSPELMAGDOTCOM • फेब्रुअरी 6, 2014 मा 8:33 छु • जवाफ
प्रिय यात्रा ली,
हामी तपाइँको लेख पढ्न को लागी कदर गर्दछौं.
के तपाइँ हामीलाई तपाइँको लेखहरु फ्रेन्च मा अनुवाद गर्न र हाम्रो वेबसाइट मा प्रकाशित गर्न अधिकार दिन सक्नुहुन्छ: gospelmag.com?
तपाईंको उत्तरको लागि अग्रिम धन्यवाद.
कृपा • फेब्रुअरी 15, 2014 मा 3:14 बजे • जवाफ
मेरो साथीले मलाई यो पुस्तक किन्नुभयो जब हामी नौजवान भइसकेका थियौं, मर्यादित ईसाई महिला. अवश्य पनि यसले विवाह र सबै कुरा पछि प्रतिक्षा गर्न प्रोत्साहित गर्छ र सम्पूर्ण पदहरू थिए. यसले उल्लेख गर्‍यो र उनी आफैंले यो कुरा उठाइन् कि भगवान हाम्रो लागि मिति चाहनुहुन्न. मैले आफैसँग भाकल गरें कि केटाहरूसँग मेरो सीमा हुन्छ (मलाई लाग्छ कि म लगभग पूर्ण रूपमा मेरो लजाई बढाउने गरी सकेको छु). म विवाहको लागि केहि चीजहरू बचत गर्ने थिए तर विगतमा र पछि पनि2वर्षहरु म निराश छु. मैले एक्लो महसुस गरें. मसँग के गल्ती होला भनेर मैले सोचें र यदि म पर्याप्त छु भने. म हैन. मलाई हरेक बाइबल पद थाहा छैन. मैले अझ धेरै अध्ययन गर्नु पर्छ. मैले प्रयास गरिरहेको छु र म कुनै केटालाई मात्र चिन्न चाहन्न किनकि म मुटुले बिग्रेको छु र उसले मलाई त्यस्तो बाटोमा डोर्याउन सक्छ जुन भगवानले मलाई चाहनुहुन्न तर म एक्लो छु. यो प्रेममा अन्य युवाहरुलाई देख्न सँधै सुन्दर छ. यो राम्रो छ यदि उनीहरू विवाहित छन् र मलाई थाहा छ ईर्ष्या गर्नु राम्रो होइन तर सबैले भने “ओह, यो तपाइँको समयमा आउने छ”. म यसको बारेमा नियमित रूपमा सोच्दछु. मैले यो साँच्चिकै राम्रो मान्छेलाई भेटे. हामीसँग धेरै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् तर उनले भने कि उनी चर्च गइरहेका छैनन्. उसले भन्यो कि उसले भगवानमा विश्वास गर्छ र मलाई थाहा छ म आफु सिद्ध छैन तर म सहयोग गर्न सक्दिन तर हैरान हुन सक्छ किनकि मलाई लाग्दैन उसले सक्रियताका साथ परमेश्वरलाई खोजिरहेको छ यदि मैले केही पश्चाताप गरिरहेको छु भने।. महिलाहरूले प्रयास गर्न र पुरुषहरू मैले सुनेको परिवर्तन गर्नु हुँदैन. यो अनुमान मा निराशा हुन्छ. खैर, म कुर्दै थकित छु. मलाई लाग्छ कि म कठिन तरिकाले जान्ने छु. यद्यपि म सेक्स गर्दिन. म छु 23 र अझै पनि यसमा बलियो रहन्छु तर म भ्रममा छु किन किन अब म आफ्नो पतिको लागि योग्य छैन. सबैजनाले आफूले चाहेको कुरा पाउँछन्. यो यति कष्टकर छ कि म केटाहरूको बारेमा सोच्न रोक्न सक्दिन. म कहिले काँही निराश हुन्छु. यदि मैले यो केटासँग विवाह गरें र ऊ परिवर्तन भएको छैन भने हामी समानरूपमा जुवाइन्छौं? केहि मानिसहरु संग सबै छ. र मैले पैसा भनेको छैन. म केवल मेरो प्रशंसा गर्ने कोही चाहन्छु. यो वर्णन गर्न अति धेरै छ.
नेटली • मार्च 11, 2015 मा 1:21 बजे • जवाफ
तपाईं अझै मात्र हुनुहुन्छ 23! :) फेला पार्न नसक्दा चिन्ता नलिनुहोस् “ठिक” एक, त्यहाँ एक मात्र व्यक्ति छैन त्यो राम्रो विकल्प हो. र केवल स्पष्ट गर्न: तपाईं यो गहन हुनुहुन्छ. त्यहाँ एक कारण यो छ तपाईं यस पृथ्वीमा यस समयमा हुनुहुन्छ. तपाईं येशूको लागि बहुमूल्य हुनुहुन्छ, केवल पढ्नुहोस् र उनका प्रतिज्ञाहरू दावी गर्नुहोस् जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं यसको लायक हुनुहुन्न. मेरो मनपर्ने छ: “म तिमीलाई कहिल्यै छाड्ने छैन।”
मैले चिनेको कसैलाई भर्खरै सम्बन्धविच्छेद भयो, र तिनीहरूको विवाह मा एक ठूलो मुद्दा त्यो एक विश्वासी थियो कि थियो र ऊ थिएन. तपाईंले गर्नु पर्ने निर्णय हुनेछ “के यो मूल्यवान् छ??” प्रभुलाई सम्पूर्ण हृदयले खोजिरहनुहोस्, र उहाँ तपाईंलाई निर्देशन दिनुहुन्छ. उसले तपाईंलाई डो .्याउनेछ. जब तपाई दिक्क र निराश हुनुभयो तब उहाँले तपाईलाई चाहिने प्रोत्साहन दिनुहुनेछ. मैले अत्यन्त उपयोगी पाएको कुरा भनेको सुत्नुभन्दा पहिले ठूलो स्वरले धर्मशास्त्र पढ्नु हो, र विशेष गरी जब म दु: खी र आक्रमणको अधीनमा छु. तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन कि परमेश्वर कुन कुनामा हुनुहुन्छ।. यदि तपाईं मात्र प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ. मलाई थाहा छ यो एकदम कडा र इमान्दारीपूर्वक सुनिन्छ, कष्टकर, तर यदि तपाईले प्रभुलाई खोजिरहनु भएको छ भने, यस मौसममा उसले तिमीलाई सन्तुष्ट पार्नेछ. त्यहाँ एक कारण छ जुन तपाईं मौसममा हुनुहुन्छ! तपाइँले कहिले थाहा पाउनु हुन्न कि ईश्वरले अरु केटीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रमाणको रूपमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुनेछ जो उही चीजसँग संघर्ष गरिरहेका छन्! :) मलाई आशा छ यसले केही तरिकाले सहयोग पुर्‍यायो! आशिष्हरू!
tshireletsopreciousntumo • नोभेम्बर 7, 2014 मा 2:43 छु • जवाफ
मैले सुनुपर्ने यो नै हो, धन्यबाद र भगवान धन्यबाद
माइकल • मार्च 22, 2015 मा 8:32 छु • जवाफ
मेरो विवाह भयो 21 र यो सुन्दर थियो …
तपाईं कसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ वा उनीहरूसँग प्रेममा पर्दा तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्न,
मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म विवाह गर्ने प्रकारको छु र युवालाई हराउने छु “रमाईलो चीजहरू” जीवन मा .. तर मलाई लाग्दैन मैले गरेको छु, मैले भर्खरै आफ्नो साझा गरें “रमाईलो चीजहरू” कसैसँग म माया गर्छु र बिना बाँच्न कल्पना गर्न सक्दैन.
जिस्सेल • मार्च 28, 2015 मा 7:41 छु • जवाफ
नमस्ते म Gisselle म होन्डुरस बाट हुँ. म छु 18 वर्ष पुरानो र मेरो प्रेमी हो 19. हामी भेट्यौं 15 महिनाौं अघि न्यु योर्कको उनको चर्चमा! म होन्डुरसमा बस्छु।. त्यसकारण यो लामो दूरीको सम्बन्ध भएको छ. म कलेजको दोस्रो वर्षमा छु र ऊ जस्तो छ. हामीले विवाह गर्नेबारे कुरा गरेका छौं. र हाम्रो चर्चका केही आफन्तहरू र एल्डरहरूले हामीलाई समर्थन गर्छन् र हामीलाई भन्नुहोस् उत्तम गर्नु भनेको हो. म यसको बारेमा अझै असुरक्षित छु।. मेरो आमा मेरो उमेर भन्दा पनि खुला छैन मेरो विवाह यति धेरै जवान छ र त्यसैले मेरो बहिनीहरू. हामीले विवाहलाई सम्भाव्यताको रूपमा विवाहको बारेमा सोच्नदेखि नै प्रार्थना गरिरहेका छौं. यदि तपाईं मेरो ईमेलमा मलाई लेख्न सक्नु हुन्छ भने म आभारी हुनेछु!
जेनिफर • जुलाई 8, 2015 मा 3:11 बजे • जवाफ
हामी विवाहित थियौं 21 धेरै अगाडी. म थियो 19 र मेरो श्रीमान् थियो 21. हामी एक अर्का र परमेश्वरसित नजिक भएका छौं. तीन बच्चाहरु पछि हामी अर्कोलाई हेर्दैछौं 20.
चार्ल्स • अगस्ट 9, 2015 मा 11:07 बजे • जवाफ
मँ ईश्वरको वचन प्रचार गर्ने सीधा अगाडी धन्यवाद को लागी धन्यवाद भन्न चाहान्छु. मैले भर्खरै 'फेलिन' हेरे’ म्युजिक भिडियो एक दिन पछाडि र प्रलोभनको पछि र यस्तो लाग्दछ जस्तो कि भगवानले मैले भनेको कुरा भनेको हो. हामीले साझा गर्ने अनुग्रहको अनौंठो उपहार नाप्न वा लिन सकिन्न. भगवान संग मेरो पैदल यात्रा मा संस्थापक केहि को लागी मेरो आँखा पुनः खोल्न को लागी धेरै धन्यवाद. म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि परमेश्वरले तपाईंलाई सेवाको काममा आशिष्‌ दिनुहुनेछ.
क्षेत्र • अगस्ट 18, 2015 मा 2:48 बजे • जवाफ
एक चोटि भगवानले तपाईलाई कसैलाई देखाउँनुहुन्छ र ब्यक्तिसंग परमेश्वरमा उस्तै उत्कट चाहना हुन्छ र तपाईसँगै सबै बाटोमा हिँड्न तयार हुन्छ. यसले कुन उमेरमा फरक पार्दैन, एक पटक तपाईको बिहे हुन्छ. कुरा मात्र हो तपाईंको सबै तरिकामा उहाँलाई स्वीकार्न, उसले तिम्रो मार्गहरू सिधा गर्नेछ (हितोपदेश 3:6). भगवान्मा केवल जोश र प्रेम छ, सही समयमा उसले तपाईंलाई तपाईंको सहयोगीको साथ उपलब्ध गराउनेछ जो यस सबैका साथ तपाईंको साथ खडा हुनेछ. भाग गर्न चाहनुहुन्न, त्यसो भए भगवान संग भाग नगर्नुहोस्. तपाईंको सबै मार्गमा उहाँलाई स्वीकार्नुहोस्, उसले तिम्रो मार्ग सिधा गर्नेछ.
स्टेसी • डिसेम्बर 14, 2015 मा 3:57 बजे • जवाफ
मेरो श्रीमान् हुनुहुन्छ 3/4 कालो र एक चौथाई सेतो।(म सेतो छु). मेरो श्रीमान्‌ मैले पनि जवान विवाह गरे 18 जाँदै 19 र मेरो श्रीमान् थियो 20. मान्छेले हामीलाई नगर्न भने, हामी गल्ती गरिरहेका थियौं र सम्बन्ध विच्छेदमा पठाउनेछौं. हामीले विवाह गरेनौं र अब हामी बस्यौं 16 वर्ष. भगवानको नियन्त्रणमा छ.
jaysmith • मार्च 12, 2016 मा 7:34 बजे • जवाफ
केविन–तपाईलाई केहि चीज तल भएको जस्तो लाग्छ. र तपाईं आफ्नो बाटोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. गरि राख, बच्चा! अन्त मा, आफूलाई आधा पनि राम्ररी चिन्नु धेरै हदसम्म हुने गर्दछ, कुनै कमजोरीहरूको बाबजुद. आशिष्हरू!
TheRealHonestTruth • मार्च 27, 2016 मा 2:44 बजे • जवाफ
त्यहाँका मानिसहरूका लागि कि कुनै राम्रो स्वास्थ्य समस्याको साथ धेरै उत्कृष्ट भाग्यको साथ धन्यवादी छन् र धेरै पैसा भएको परिवारको साथ विवाह गर्नु पक्कै पनि धेरै आभारी हुनु पर्छ किनकि उनीहरूसँग वास्तवमा गुनासो गर्न कुनै कारण हुनुपर्दैन हामीमध्ये धेरैजना त्यो भाग्यशाली छैनौं, यद्यपि तपाई मध्ये धेरैले धेरै जवान विवाह गरेका छन जुन तपाईहरु मध्ये धेरै छन् जुन आज पनि एक साथ छन्.
टाय स्मिथ • जुन 26, 2016 मा 9:55 बजे • जवाफ
धेरै स्रोतसाधन उनी शुक्रबार शिविरमा बसी आएका थिए 24/6/2016
राहेलसान्चेज • नोभेम्बर 2, 2016 मा 1:14 बजे • जवाफ
यसै वर्षको सुरुमा मेरो श्रीमान्‌ र मैले बिहे ग .्यौं. उहाँ हुनुहुन्छ 22, र म हुँ 21. म किन मँ सबै समय सोधिन्छ “मेरो जवानीलाई फ्याँक” वा किन म कलेजमा विवाह गर्ने बारे पनि सोच्ने गर्छु. म आश्चर्यजनक रूपमा मलाई हेरे जस्तो देखिन्छ जो बुढा महिलाहरु बाट सबैभन्दा हानिकारक टिप्पणीहरु प्राप्त. यो हृदयविदारक हो कि अरूले पहिचान गर्न सक्दैन कि म वास्तवमै मेरो युवावस्थामा मेरो सबैभन्दा मनपर्ने व्यक्तिसँग संसारमा आनन्द लिइरहेको छु. यो दु: खी छ जब मान्छे (पुरानो पुस्ता पनि) यो लाग्छ कि यो राम्ररी ठीक छ उनीहरूको २० औं मानिसहरूका वरिपरि सुत्न, तर जब उनीहरू विवाह गर्छन् यो स्तम्भित र भयानक छ. हामी केवल आशा गर्दछौं कि हाम्रो विवाहले अरूलाई तयार पार्दा उफ्रि गर्न हौसला प्रदान गर्न सक्छ, जुनसुकै समाजले उनीहरूलाई के भन्छ.
धेरै दुःखद सत्य • नोभेम्बर 27, 2017 मा 8:09 छु • जवाफ
त्यसोभए त्यहाँ हामीमध्ये धेरै असल अविवाहित पुरुषहरू हुन्छौं जुन वास्तवमा राम्रो महिलासँग बस्न आशा राख्दै त्यहाँ बस्नको लागि, तर दुर्भाग्यवस यो अझै पनि हाम्रो लागि भएको छैन. र पुरुष र महिलाका लागि जुन एकअर्कालाई भेटेर अत्यन्तै धन्यका थिए र परिवार पाएकोमा तपाईसँग साँच्चिकै आभारी हुनुपर्दछ.
alvina.reborn • जनवरी 3, 2018 मा 2:39 बजे • जवाफ
धेरै धेरै धन्यवाद. धेरै बर्षदेखि मैले आफैंलाई भनेको छु कि एक निश्चित उमेरमा मात्र विवाह गर्न सक्छु. तर अब म अझ राम्ररी जान्दछु.